UMónica Rodríguez kunye noPedro Ramos, Imbasa ye-EDEBÉ yoncwadi lwabantwana kunye nolutsha | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ukhuphiswano kunye neeMbasa, Ababhali, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha
Ifoto ngoncedo lwesebe leendaba lase-Edebé.
UMonica Rodriguez (Oviedo, 1969), kunye neveli rey, kwaye nguPedro Ramos (Madrid, 1973), kunye nenoveli I-ewok egadini, ngabaphumeleleyo kuhlelo lweXXX lwe Ibhaso le-Edebé laBantwana kunye noLutsha loNcwadi.
1 iinoveli eziphumeleleyo
1.2 I-ewok egadini
2 Iminyaka engama-30 noncwadi lwabantwana nolutsha
Le yimisebenzi mibini eyothusayo ngenxa yobunyani oburhabaxa abayivezayo, ngolwimi apho amagama ahlala ebaluleke njengokuthi cwaka.
Iphefumlelwe sisiganeko esiyinyani, luhambo oluya enzulwini yomphefumlo womntu osinika yona UMonica Rodriguez ukuzama ukuqonda indlela a umntwana ekufuneka iphile phakathi komhlambi izinja eziphambukayo, apho afumana ukhuphiswano kunye nothando. Ibali eligcwele imibongo, kwiindawo ezinekhephu kunye namahlathi anzulu, eliphanda indlela umntwana omncinci ajongana ngayo ukulahlwa, ukuya impatho-mbi okanye u lonwabo, yaye ngaphezu kwako konke kwizilo… nokuba zizilwanyana okanye abantu.
Un ewok egadini
nguPedro Ramos ijongana neemo ezimnyama, iimpawu ze ukudakumba nokuzibulala, isibetho esisasazeka kwibutho labantu, phakathi kwabantu abaselula ababonakala benezinto zonke ukanti beziva bengento yanto. Le noveli ithi isikhumbuzo ukuba, nangona i-sabotage yengqondo, ethi ngaxa lithile isohlwaya sonke ngetyala, usizi kunye nokuzohlwaya, kunye nombono wokuthatha ubomi bethu, rhoqo kukho into yokongeza kolo luhlu lwezizathu zokuhlala uphila.
Iminyaka engama-30 noncwadi lwabantwana nolutsha
Kolu hlelo i Isixhobo se30 ukusukela Ibhaso le-Edebé laBantwana kunye noLutsha loNcwadi waqala uhambo lwakhe.
Kulo nyaka eli wonga liye kubabhali ababini abanekhondo elide nelivunyiweyo kuncwadi lwabantwana nolutsha. Ukuthatha inxaxheba kolu khuphiswano ayaziwa kwaye nyaka ngamnye ijaji isungula iingqikelelo zayo malunga nokuba ngubani na ozifihlayo emva kwe-escrow ephumeleleyo ngaphandle kokusilela ukuzothusa ngokuphindaphindiweyo, kodwa inyaniso kukuba ukusukela ngoJanuwari 1993 bafunde kwaye banikezela ngemisebenzi emangalisayo, bafumanisa emitsha. iipeni kwaye negalelo ekuhlanganiseni umsebenzi wababhali asele bekho.
Umpapashi unebhongo nge-intuition yejury kwaye eminye yeyona mizekelo ibalaseleyo yeendlela zayo zezi: ophumelele uhlelo lokuqala kudidi lolutsha, owayengaziwa ngelo xesha. UCarlos Ruiz Zafon owathi, eneminyaka engama-28 kuphela ubudala, wathabatha ibhaso kunye INkosana yeMist; okanye imisebenzi emithathu eyanikezelwa ngeBhaso le-Edebé elathi kamva lafumana iBhaso leSizwe laBantwana kunye noLutsha loLutsha, libaqinisekisa njengemisebenzi ekhethekileyo yohlobo lwayo: iLa isla de Bowen, nguCésar Mallorquí, iPalabras poisonadas, nguMaite Carranza kunye nale 2020, isiphumo se-frankenstein de UEria Barceló.
Kwakhona iMbasa ye-Edebé unqumla imida yaye sele kukho iinkupho zamazwe ngamazwe ezingaphezu kwe-143 zamabhaso xa ewonke, iinguqulelo kumazwe angama-25 nakwielwimi ezahlukeneyo ezingama-22, ukususela kwisiJamani, isiFrentshi, isiTaliyane okanye isiPhuthukezi, isiPersi, isiHebhere, isiTshayina okanye isiKorea. Kwezi nguqulelo, ophumelele kudidi lwaBantwana ngo-2013, Moss, de UDavid Cirici, nayo iphumelele i-2017 Strega Ragazzi Award ehloniphekileyo, kunye amagama anetyhefu ipapashwe kumazwe ali-16.
Imbasa ye-Edebé ine iyonke endowment kwezoqoqosho 55.000 euro (I-€ 30.000 yomsebenzi wolutsha kunye ne-€ 25.000 yomsebenzi wabantwana), ibe lelinye lawona mabhaso aphezulu kweli lizwe. Kule XXX uhlelo lunikezelwe Imibhalo-ngqangi engama-239 yokuqala evela kuzo zonke iikona Ukusuka eSpain y ukusuka kwamanye amazwe amaninzi ehlabathini, ngakumbi ukusuka Latin America. Ukusuka kwabo, 140 zinikezelwe kwifom umntwana y 99 kwindlela yokuziphatha ulutsha; I-193 yabhalwa ngeSpanish, i-29 ngesiCatalan, i-9 ngesiGalician kunye ne-8 ngesiBasque.
Imisebenzi iya kupapashwa ngoMatshi en papel nangaphakathi ebook ngeelwimi ezi-4 zikaRhulumente, nakwibraille. Kwaye ukususela ngo-2017, ngenxa yesivumelwano esifikelelwe kunye neqonga Ibali, zikwapapashwa kwi-audiobook.
Umthombo: isebe leendaba ze-Edebé.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ukhuphiswano kunye neeMbasa » UMónica Rodríguez noPedro Ramos, Ibhaso le-EDEBÉ kuncwadi lwabantwana nolutsha